Realme 3 Pro wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo software ah | Androidsis
Waa wax lala yaabo waxa ay Realme ku samaynayso taleefannadeeda casriga ah. Tani waxay ahayd saameynta qalabkeeda wanaagsan ee ay hadda ku jirto sumadda casriga ee ugu koritaanka badan adduunka, taas oo, lafteeda, wax badan sheegaysa. Tani waxay sabab u tahay qiimaha wanaagsan ee lacagta ay ku bixiso nooc kasta iyo, marka lagu daro, dareenka ay siineyso kuwan oo leh cusbooneysiinta software-ka ee soo noqnoqda, iyo waxyaabo kale.
El Realme 3 Pro Waa mid ka mid ah boosteejooyinka soo bandhigaya maanta inta ugu badan suuqa dhexdiisa. Taleefankani hadda wuu helayaa xirmo firmware cusub in, shaki la'aan, in ka badan hal isticmaale ayaa jeclaan doona, maadaama ay ku imaaneyso qalabayn horumar badan iyo howlo cusub.
Cusbooneysiinta bilaabeysa inay ku faafto adduunka 'Realme 3 Pro' waxay hoos timaadaa nooca 'RMX1851EX_11_A.20'. Tan waxaa ka mid ah balastarka amniga ee Oktoobar 2019, Xaaladda Madoow, animation cusub oo lacag bixin ah, toggle ah xarunta ogeysiinta si aad si fudud ugu bedesho SIM-yada, iyo inbadan. Diiwaanka isbeddelka dhammaystiran ee qayb kasta oo ka mid ah qalabka ayaa lagu sharaxay hoos:
Qalabka Amniga Android: Oktoobar 2019
Hab mugdi lagu daray.
Animation loading cusbooneysiiyay
Lagudarey isbadal deg deg ah inta udhaxeysa SIM-ga xarunta ogeysiiska.
Xarunta ogaysiinta iyo heerka aqoonsiga
Xusuusinta waa laga saaray markii kulkululku awood yeesho.
Farriinta waa la tirtiray markii taleefanku xididaysan yahay.
Ikhtiyaar lagu daray si aad ugu xoqdo shaashadda guriga raadinta ama xarunta ogeysiinta adduunka.
Realme Laboratory ayaa lagu daray.
Ikhtiyaar lagu daray dhibcaha ogeysiinta wixii cusbooneysiin ah.
Nooca qalabka firmware ee la cusbooneysiiyay si loo hagaajiyo khibrada ciyaaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Cusbooneysiinta cusub ee Realme 3 Pro waxay ku dareysaa qaabka mugdiga iyo warar badan oo dheeri ah